Vatyairi vemarori Born to Ultratrail Tsvuku / dema yevarume nevakadzi - THE INDIAN FACE
Hanzi The Indian Face® dzinozivikanwa uye dzinotengeswa munyika dzinopfuura makumi matatu. Iwe unofunga kuti kukuvara here? #VABEREKWA
TIRI VADZIDZISI KUUPENYU: Kurarama kunoshamisa, isu tinoda zvese izvo izvo Amai Hupenyu zvavanotipa uye zvinotipa isu mazuva ese ehupenyu hwedu. Nyika izere nenzvimbo dzinoshamisa dzaunofanirwa kuongorora uye kunakidzwa.
TIRI YEMAHARA MWEYA: Isu tiri mweya wakasununguka uye ndihwo hunhu hwedu hwakanyanya kukosha. Isu tiri murudo nehupenyu uye isu tinoda kunyatsoshandisa sekondi yega yega, sekunge kuti ndiyo yekupedzisira. Isu tinotiza kubva kune yakasimbiswa tsika, isu hatiteedzere uye isu tinosvetukira kumusoro muzviitiko zvitsva.
Iwo makapu evarume kana vakadzi?
Iwo akazara unisex ngowani, ndokuti, ivo vanopfekedzwa nevakadzi nevakadzi. Vanonzwa vakanaka mune zvese zviitiko. Iwo emitambo-echitauro makepisi anogadzirisa uye anoenderana nemhando dzakasiyana dzemusoro nekuda kwekuvharwa kwavo kweSpapBack uye vanodawo vese murume nemukadzi, izvo zvinokupa iwe mutambo wemitambo iri mufashoni. Mitambo yemitambo yevanhu vane mweya wemitambo.
Chii chinonzi SnapBack mhando kuvharwa?
Chinogadziriswa bhatani poindi yekuvhara iyo inogona kuwedzeredzwa kana kupfupiswa kuti ikwane chero saizi yemusoro.
Chii chinonzi trucker cap?
Chipenga chemarori chinozivikanwa zvakare muChirungu se "gimme cap" kana "feed cap" chiumbwa chemhando yepamusoro asi chine mesh kumashure. Maitiro ehembe dzemarori akaberekwa mumakumi matanhatu panguva iyo muUnited States vatyairi vemarori vanotakura mombe vakatanga kuvapfeka. Tsotsi dzemarori dzakazove chikamu cheyunifomu yebasairori. Ivo vaive chiratidzo chake, chisimbiso chechokwadi chehunyanzvi hwekutakura.
Kuchengeta uye kuwacha makapisi ako kwakakosha mukuchengetedza kwavo uye mukurumari mune yakanaka mamiriro, asi kwete neimwe nzira!
Usapwanya chivharo kuti usarase chimiro chayo chepakutanga:
Iwo makapeti ane "chimiro" chinokwezva patinovagadzira, kana iwe ukavatarisira zvakashata, ivo vacharasikirwa nechimiro chavo chepakutanga uye havachazotonhore zvakadaro. Rangarira izvi !!
Gara uchidzivirira nguwani dzako kubva pakuunganidzwa kweguruva, kukwesana uye chero chiitiko chingamuka. Paunenge usiri kuzvishandisa, usazvikanda chero kupi, uzvichengete mudhirowa kana muwadhiropu uye kana uchikwanisa kuzvichengeta muvharo, zvese zvirinani.
Dzivisa kushandisa zvigadzirwa zvinogona kukuvadza kana kusvibisa jira rehupenyu:
Kuti uchengetedze makapeti ako mushe, dzivisa kushandisa zvigadzirwa zvakaita semafuta ekuzora, mafuta ezuva, bvudzi rekushesa kana zvigadzirwa zvinogumbura. Kana iwe uchifanira kuzora kirimu kana cologne, edza kubvisa kapu yako usati waishandisa uye nekudaro dzivisa icho chikamu chezvigadzirwa izvi chinogona kubva pamucheka. Zvakare, usasiye kapu yako iri pachena kuzuva kwemaawa, iwe unoziva, kuti mwaranzi yezuva inoshatisa ruvara rwemachira uye kutsemura zvigadzirwa.
Shamba nguwani dzako kazhinji:
Usambofa wakawacha mumuchina wekuwachisa, gara wakangogara nguva dzose uye chiuru zvakapetwa GARA uchizvisuka nemaoko nesipo nemvura. Mune ino link tinokusiira chinyorwa chine iyo nhanho dzekugeza makapu ako zvakanaka. Dzvanya apa
Tevedza aya matipi uye iwe uchaona kuti ako marori macheki anokugarisa iwe kwenguva yakareba.
Kubva pane 4 maonero Nyora zvaunofunga